Doorasho ka dhacaysa Ukraine - BBC News Somali
Doorasho ka dhacaysa Ukraine
Madaxweynaha dalka Ukrein , Petro Poroshenko, ayaa ku dhawaaqay doorashadan baarlamaanka ee wakhtigeeda laga soo hormariyey, kaddib markii uu ku eedeeyey baarlamaankii hore in uu hor istaagay isbadaladii la doonayey.
Mr Poroshenko ayaa isaga qudhiisa la doortay bishii May, waxyaabaha kale ee uu la ballan qaadayna waxaa ka mid ahaa la dagaalanka musuq-maasuqa, kaas oo ahaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo la dalbanayey xilligii kacdoonka.
Mar uu hadlay maalintii Sabitada, ayuu Mr Poroshenko waxa uu sheegay in uu filayo in doorashadan ay ka dhalan karto in si buuxda ay awooda ula wareegaan.
Iyadoo la filayo in xisbiyada siyaasadeed ee u janjeera reer galbeedka ay qaadan doonaan inta badan kuraasta baarlamaaka.
Balse waxaa jira kala qeybsanaan ka muuqata dhincyadooda.
Kala bar 540 kuxigeeno ayaa laga soo xulanayaa liisaska xisbiyada musharaxiinta, taas oo laga tix raacayo tirada codbixinta guud uu xisbiga helo.
Xisbiyada ayaa laga doonayaa in ay helaan boqolkiiba shan oo ah tirada lagu xiray si ay xubno ugu yeeshaan baarlamaanka.
Codbixinta ayaa sidoo kale waxa ay ka dhaceysaa bariga dalka Ukrein, Waloow saraakiisha dalkaasi ay sheegayaan in ku dhawaad kala bar ka mid ah goobaha codbixinta ee degmooyinkaasi aana la furaneynin, sabatuna ay tahay dagaalka halkaasi ka socda.
27 kuraas kuxigeeno oo laga soo dooraan lahaa goobaha ay gacanta ku hayaan falaagada iyo Crimea oo ay goosatay Ruushka ayaa noqon doona kuwa maran.